सपनामा सुन देख्नु कस्तो अवस्थामा शुभ, कस्तोमा अशुभ ? हेर्नुहोस् सुनले गर्ने संकेत ! – List Khabar
Home / समाचार / सपनामा सुन देख्नु कस्तो अवस्थामा शुभ, कस्तोमा अशुभ ? हेर्नुहोस् सुनले गर्ने संकेत !
admin August 15, 2021 समाचार Leaveacomment 132 Views
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सपनामा देखिने सबै कुराले हामीलाई केही न केहि संकेत गराइरहेको हुन्छ। सपनाको सम्बन्ध हाम्रो भित्री मन वा आत्मासँग जोडिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। कहिलेकाँही सपनामा एउटा कुरा बारम्बार देखि रहन्छ भने यसको मतलब सपनाले हामीलाई केहि संकेत दिन खोजि रहेको हुन्छ। तर हामी यसलाई बुझ्न भने सक्दैनौ। केही सपनाले भने, जीवनमा राम्रो संकेत पनि दिने गर्दछ।
Previous नेपालमै छ यस्तो अचम्मको परम्परा, जहाँ विवाहपछि सबै दाजुभाईसँग पालैपालो रात बिताउनु पर्ने (पुरा हेर्नुहोस)
Next अमेरीकामा एकाएक कसरी सुरु भयो चर्च भित्र योग कक्षा? (भिडियो हेर्नुहोस्)